पत्र कथा : तिमीले चाहेका चार शब्दहरु ! - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← गजल : खेल खेली दियो
गजल : म गजल लेख्छु →
पत्र कथा : तिमीले चाहेका चार शब्दहरु !
धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो हरेक जन्म दिन र बिवाह दिवसमा अपरिचित तरीकाले तिमीले पठाउने गरेको शुभकामना अनि हामी दुबैका लागि उपहार यस पाली पनि पायौं। हे भगवान, फेरी पनि मैले पूनमसँग झुट बोलेँ। के गर्ने यस्तो गर्दा तिमी खुशी हुन्छ्यौ। तिम्रो धेरै खर्च गर्ने बानी अझ पनि उस्तै छ। धन्न उमेशजीले पूर्‍याउनु भएको छ। फोटोहरु हेर्‍यौ? मेरो व्यक्तिगत ब्लग साइटमा? तिमीले पठाई दिएको उपहार लगाएर पूनम कस्ती राम्री देखिएकी हगी? मलाई पनि ठ्याक्कै मिलेको छ।
तिमीलाई जस्तै मलाई पनि अचम्मको भ्रम हुने गर्छ। जव कहिले कहीं पूनम रिसाउछिन, म उनको चेहरामा तिम्रो प्रतिविम्ब देखी एकोहोरो हेरी टोलाउँदो रहेछु। फेरी पूनम भन्छिन – “छया् ……बुढो भएर पनि…..।” म फेरी झल्याँस्स हुन्छु। उनको रिस मरिसकेको हुन्छ।
(स्रोत : Sapsanasansar)
विधा : नेपाली कथा, पत्र साहित्य | Patra Sahitya, राजु लामिछाने - Raju Lamichhane. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।